U-Abrahams uzosimemezela namhlanje isinqumo ngokushushiswa kukaZuma | News24
U-Abrahams uzosimemezela namhlanje isinqumo ngokushushiswa kukaZuma
Johannesburg – Inhloko yeNational Prosecuting Authority, uShaun Abrahams, kulindeleke ukuba asenze ngoLwesihlanu ntambama isimemezelo esibhekwe ngabomvu mayelana nokuthi uJacob Zuma uzobekwa yini amacala noma cha.
Lesi simemezelo sizokwenziwa ngo-15:30 emahhovisi e-NPA aseSilverton, ePitoli, kusho umkhulumeli wakhe uLuvuyo Mfaku etshela iNews24.
INkanto yoMthethosisekelo ngoLwesithathu yasihoxisa isicelo esafakwa yiCouncil for the Advancement of the South African Constitution (Casac), esasifuna ukuvimbela u-Abrahams ekutheni enze lesi simemezelo, ekubeni naye esabhekene necala mayelana nesikhundla sakhe kwi-NPS.
OLUNYE UDABA: U-Abrahams usesithathile isinqumo ngamacala anukwa ngawo uZuma
Amacala uZuma angase abhekane nawo mayelana nodaba lwango-2009 lwama"Spy Tapes" abandakanya inkohlakalo nokukhwabanisa.
UZuma ngaphambilini kwadingeka ukuba enze izincomo zokuthi kungani kumele kuhoxiswe la macala, ngemuva kokuthi iNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala yahoxisa isicelo sikalowo owayeyinhloko ye-NPA sokuthi kuguqulwe isinqumo esenziwa yiNkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng mayelana nalolu daba.
I-NPA eminyakeni eyishumi eyedlula yathatha isinqumo sokuba angabhekani namacala uZuma.